တရုတ်နိုင်ငံတွင် NEV စက်ရုံ တည်ထောင်ရန် Audi-FAW ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိုအတည်ပြု ခဲ့သည် - Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံတွင် NEV စက်ရုံ တည်ထောင်ရန် Audi-FAW ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိုအတည်ပြု ခဲ့သည်
Feb 18, 2022, 16:58ညနေ 2022/02/18 23:15:36 Pandaily
ပူးတွဲ စီမံခန့်ခွဲ စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် စီမံကိန်း အသစ်ဂျာမန် ဇိမ်ခံ ကား အမှတ်တံဆိပ် Audi နှင့်တရုတ် ကား ကုမ္ပဏီကြီး FAWမၾကာေသးခင္က တရားဝင္ အတည္ ျပဳၿပီး ၿပီ။ ဂျာမန် အမှတ်တံဆိပ် သည် မကြာမီ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ မြောက်ပိုင်း Jilin ပြည်နယ်တွင် လျှပ်စစ် ကား စက်ရုံ အသစ် တစ်ခုတည်ဆောက် တော့ မည်ဖြစ်သည်။
ပြည်နယ် စီမံကိန်း ကြီးကြပ် ရေးမှူး ၏ အသိပေး ချက်အရ စက်ရုံ ၏လုပ်ငန်း အစီအစဉ် သည်ယခုနှစ် April ပြီ လမှ ၂၀ ၂၄ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ လအထိ ကြာမြင့် မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု သည္ စက္႐ံု တြင္ စုစုေပါင္း ယြမ္ ၂၀ ဒသမ ၉၃ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂၉ ဘီလ်ံ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကား အစီးေရ ၁၅၀, ၀၀၀ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္မည့္ NEV ေမာ္ဒယ္ သံုး မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ မည္ျဖစ္သည္။
စီမံကိန်းသည် Jilin ပြည်နယ် Changchun မော်တော်ယာဉ် စီးပွားရေး နှင့်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဇုန် တွင်တည်ရှိပြီး စုစုပေါင်း 2. ရိယာ ၂. ၄၆ သန်း စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်း ပြီး မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှု အလုပ်ရုံ နှင့် ထိန်းချုပ် ရေးဌာန အပါအ ၀ င် ပုံနှိပ် ခြင်း၊ ဂဟေဆော် ခြင်း၊ ဆေးသုတ် ခြင်း၊ နောက်ဆုံး တပ်ဆင် ခြင်း၊ ဘက်ထရီ တပ်ဆင် ခြင်းနှင့်အခြား ဆက်သွယ် မှုများကို ဖုံးလွှမ်း ထားသည်။
၂၀ ၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် Audi သည် FAW နှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် စွမ်းအင် ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီ အသစ် (JV) တည်ထောင် ခြင်းကို ကြေငြာခဲ့သည်။ ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီသည် အရည်အသွေး မြင့်မားသော ဗိသုကာ စွမ်းအင် (PPE) ပလက်ဖောင်း ကို အခြေခံ၍ Audi နှင့် Porsche ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များကို ဒေသတွင်း ထုတ်လုပ်ရန် ကတိက ဝတ်ပြု လိမ့်မည်။ ပထမဆုံး မော်ဒယ်ကို ၂၀ ၂၄ ခုနှစ်မှာ စတင် ရောင်းချ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Audi ၊ Volkswagen Group နှင့် FAW တို့က Audi FAW စွမ်းအင် ဖက်စပ် လုပ်ငန်း သည် Changchun တွင် အခြေချ မည်ဖြစ်ပြီး ပထမ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုသည် ကုမ္ပဏီ၏ ၆၀% ကိုပိုင်ဆိုင် လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
သို႔ေသာ္ တရား၀င္ ေၾကညာ ၿပီး တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာတြင္ သိသာ ထင္ရွား သည့္ တိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသး ေပ။ ၂၀၂၁ နိုဝင်ဘာ လကုန် မှာရိုက္တာသက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးတာ ေႏွာင့္ေႏွး ေနတာေၾကာင့္ စီမံကိန္း ဟာ အစီအစဥ္ ေနာက္က် ေနတယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ယနေ့တွင် ၎င်းသည် ရှေ့သို့ ကြီးမားသော ခြေလှမ်း တစ်ခု လှမ်း လိုက် ပြီဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်း Audi သည် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ Audi ၏ Vorsprung 2030 မဟာဗ်ဴဟာ အရ ၂၀ ၂၅ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ Hybrid နည္းပညာ မ်ားအတြက္ ယူ႐ို ၁၈ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၄၇ ဘီလ်ံ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း ေသာ လွ်ပ္စစ္ ကား အမ်ဳိးအစား ၂၀ ေက်ာ္ကို မိတ္ဆက္ ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း Audi က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀ ၂၆ ခုနှစ်မှစ၍ Audi ၏ ကမ္ဘာ့စျေးကွက် အတွက် ကား အသစ် များသည် လျှပ်စစ် မော်ဒယ် များ သာဖြစ်သည်။ ၂၀ ၃၃ ခုနှစ်တွင် Audi သည် ပြည်တွင်း လောင်ကျွမ်း သော အင်ဂျင် များ ထုတ်လုပ်မှုကို တဖြည်းဖြည်း ရပ်ဆိုင်း ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အ ၀ ရရှိ မည်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Pony.ai သည် FAW Nanjing နှင့် L4 Class Autopilot နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိုရရှိ ခဲ့သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Audi သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တွင် ကား အစီးရေ ၁. ၆၈ သန်း ရောင်းချ ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ နှင့်အတူတူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် NEV ဈေးကွက်တွင် Audi သည် ၈၁, ၈ ၉၄ စီး ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၅၇. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ တရုတ် စျေးကွက် သည် Audi ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပြင် အဆင် ၏ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Audi သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က တရုတ်နိုင်ငံတွင် NEVs ၇ ၀၁, ၂ ၈၉ ကို ရောင်းချခဲ့သည်။
Cross-border Nov 10 နိုဝင်ဘာ 10, 2021
Cross-border Nov 11 နိုဝင်ဘာ 11, 2021
Cross-border Nov 30 နိုဝင်ဘာ 30, 2021
Cross-border Dec 31 ဇန်နဝါရီ 6, 2022